घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू रोनाल्ड Koeman बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
रोनाल्ड कोम्यानको हाम्रो जीवनी उनको बचपन कहानी, अर्ली लाइफ, अभिभावक, पारिवारिक जीवन, पत्नी, बच्चाहरू, नेट मूल्य र जीवनशैली को बारे मा जानकारी बिच्छेद।
छोटकरीमा, हामीले एक व्यापक रूपरेखा राख्यौं जुन रोनाल्ड कोमानको व्यक्तिगत जीवनमा उल्लेखनीय घटनाहरू प्रकट गर्दछ, बचपनका दिनहरूदेखि जब उनी लोकप्रिय भए।
रोनाल्ड कोम्यानको जीवन इतिहास।
हो, बार्सिलोनाको लागि उनको अनन्त आवेगको बारे सबैलाई थाँहा छ र क्लबको साथ एक खेलाडीको शोषण गर्दछ। यद्यपि धेरैले रोनाल्ड कोम्यानको जीवनी पढ्न समय निकालेका छैनन् जुन प्रेरणादायक छ। अब थप विज्ञापन बिना, हामी सुरुको वर्षहरू र परिवार पृष्ठभूमिबाट सुरु गरौं।
रोनाल्ड कोम्यान बचपन कहानी:
उसको जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, डचले "टिन्टिन" उपनाम राख्छन्। रोनाल्ड कोम्यानको जन्म मार्च १ 21 1963 को २१ औं दिनमा उनकी आमा मरिजेके कोम्यान र बुबा मार्टिन कोम्यान नेदरल्याण्ड्सको जान्डम शहरमा भएको थियो। एफसी बार्सिलोना प्रबन्धक आफ्नो सफल आमा बुबा बीचको मिलनबाट जन्मेका दुई बच्चा मध्ये दोस्रो हो।
रोनाल्ड कोम्यान प्रारंभिक जीवन:
डचहरूका लागि, १ 1960 s० को दशकमा हुर्किएको रमाइलो थियो। रोनाल्ड कोम्यानको प्रारम्भिक जीवन उत्तरी हल्याण्ड, नेदरल्याण्डमा अवस्थित Zaandam को शहर मा खर्च गरिएको थियो। उहाँ व्यावहारिक रूपमा बाँच्नुभयो र एक ठूलो भाइ एरविनको साथ हुर्कदै गर्दा फुटबलको खेलको सास लिनुभयो। ती दुबै जनाले अक्सर आफ्ना बुवालाई खुशी पार्न लामो घण्टा सडक फुटबल खेलाउँथे। केही अन्तरालहरूमा, उनकी आमाले तिनीहरूलाई ताजावाटको लागि बाल्कनीबाट खाना फ्याक गर्नुपर्‍यो।
बाल्यकालको फोटो रोनाल्ड कोम्यान उसको ठूलो भाई र बुबासँग।
रोनाल्ड कोम्यानको परिवार पृष्ठभूमि:
सायद तपाईलाई थाँहा थिएन, रोनाल्ड कोम्यानका आमाबुवा नेदरल्याण्डका मध्यमवर्गीय नागरिक थिए। उनको बुबा मार्टिन धेरै पहिले फुटबलमा थिए उनको जन्म भन्दा पहिले। परिणामस्वरूप, तिनीहरूको परिवारलाई कहिल्यै अभाव थाहा थिएन।
रोनाल्ड कोम्यानको पारिवारिक उत्पत्ति:
नजान्ने व्यक्तिहरूका लागि, एफसी बार्सिलोना प्रबन्धक नेदरल्याण्डका अधिकांश नागरिकहरू जस्तो डच जातीय हुन्। वास्तवमा, डच देशको आधिकारिक भाषा हो जसले अद्भुत खेलाडीहरूको गर्व गर्दछ जसमा भर्जिल भ्यान डिजक र म्याथिज डे लिग्ट छन्।
क्यारियर फुटबलमा रोनाल्ड कोम्यानको शोषण:
"टिन्टिन" ले पेशेवर क्लब फुटबलमा आफ्नो यात्रा स्थानीय क्लब VV हेल्पम्यान र GRG Groningen को साथ शुरू गर्‍यो। उनले एफसी ग्रोनिंगेनको प्रगति गरे र १ the वर्षको रेकर्ड उमेरमा डेब्यू गरे। कोम्यान डिफेन्डर भए पनि उनले for ० पटक क्लबको लागि in times पटक नेटको पछाडि फेला पार्न सके। उसको राम्रो फाराम एजेक्समा जारी रह्यो जुन उनले एरेडिभीसी शीर्षक जित्न मद्दत गरे।
कोम्यान PSV Iindhoven मा सामेल हुन गए जुन उनीहरूसँगको समयमा एक युरोपेली क्लबसँग तीन पटक एरेडिभिसी जित्यो। एक खेलाडीको रूपमा आफ्नो क्यारियरको चरम सीमामा, कोम्यानले बार्सिलोनालाई युरोपियन कप लगायत लगातार चार ला लागा ट्राफीमा भेट्टाए। त्यसपश्चात उहाँ फेयुनर्डमा सामेल हुनुभयो र उनीहरूसँग केही havingतुहरू बिताएपछि आफ्ना बुटहरू लटकाउनुभयो।
रोनाल्ड कोम्यानको फेम कथा:
पूर्व पेशेवर फुटबलर सेवानिवृत्त भएको लगत्तै प्रमुख कोचको रूपमा पहिलो नियुक्ति पाएनन्। सन् १ 1998 1988 F फिफा विश्वकपको क्रममा उनी नेदरल्याण्ड्सका राष्ट्रिय प्रशिक्षक स्टाफको पहिलो सदस्य थिए। नियुक्तिलाई एक तथ्यसँग जोड्न सकिदैन कि उसले १ XNUMX XNUMX को यूरो कप एक राष्ट्रिय टीमसँग खेलाडीको रूपमा जित्यो।
उनले २००० मा डच फुटबल क्लब भिटेसेको प्रमुखको रूपमा पहिलो प्रबन्धकीय क्लब लैन्डिनु अघि सहायक कोचको रूपमा बार्सिलोनासँग पनि स्वाद पाए। क्लब कम बजेटमा चलिरहेको थियो तर कोइमानले उनीहरूलाई यूईएफए कप स्थानमा लैजान सक्दो प्रयास गर्यो।
रोनाल्ड कोम्यान कसरी सफल भयोः
डचको प्रबन्धकको रूपमा पछिल्लो भूमिकाले उनलाई देख्यो कि चेकर क्यारिअर प्रबन्ध गर्ने टोलीहरू थिए जसमा एजेक्स, बेनफीका, PSV, Valencia, AZ र Feyenoord समावेश छन्। कोम्यानको कोचिंग क्यारियरको शिखर प्रीमियर लिगमा साउथेम्प्टनको प्रबन्धकको रूपमा उनको पोषण हो। अ side्ग्रेजी पक्षको साथ पछि Mauricio Pochettino, डचलाई तीन पटक २०१––२०१ and र २०१––२०2014 se को मौसममा लिगको प्रबन्धकको रूपमा नाम दिइएको थियो।
युग पछि डचम्यान दोस्रो व्यवस्थापक बन्नुभयो डेभिड मोयेस २०१ Ever-२०१ between को बीच एभर्टन कोच गर्न। उनलाई पछि २०१ 2016 मा नेदरल्याण्ड्स राष्ट्रिय टोलीको प्रबन्धक बनाइयो। कोइम्यान बार्सिलोनाको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा बार्सिलोना फर्किए पछि क्लबले छुट्टिए। क्विक Seitien लामो प्रशंसकहरु लाई क्लबको धेरै प्रशंसकहरु लाई देखियो।
फुटबल प्रशंसकहरूको लागि, नयाँ बार्सिलोनाको जीवनी क्लबसँग उनको प्रेम ईतिहास फेला पारी पहुँच गर्न सकिदैन। वास्तवमा धेरैले विश्वास गर्छन् कि उनी सन् २०१//२०२० को सीजन अन्तर्गत कातालान क्लबलाई फेरि गौरवको बाटोमा उचाल्नका निम्ति सही व्यक्ति हुन सक्छन्। Quique Setién। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
रोनाल्ड कोम्यान पत्नी र बच्चाहरूको बारेमा:
उनका प्रशंसकहरूको लागि यो आशा गरिन्छ कि सफल डचम्यानले उनका लागि केही मार्शल सम्बन्ध राख्नुपर्दछ। सत्य हो, उसले यस सम्बन्धमा निराश पार्दैन। रोनाल्ड कोम्यानको पत्नी बार्टिना नामबाट जान्छिन। बार्सिलोनाका म्यानेजर डिसेम्बर १ 1985 XNUMX मा उनको साथ गएको ठाउँबाट तल गइन् र त्यसपछि उनीहरू खुशी छन्।
रोनाल्ड कोम्यान र तिनकी श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा तीन जना बच्चाले आशिष्‌ पाए। तिनीहरू छोरा रोनाल्ड कोम्यान जूनियर र टिम संग एक छोरी डेबी समावेश गर्दछ। Koeman का सबै बच्चाहरू मध्ये, रोनाल्ड Jnr मात्र एक छ जो आफ्नो बुबाको पाइला अनुसरण गर्न निर्णय गरे। आफ्नो बुवाको जीवन कथा लेख्ने समयमा, रोनाल्ड जुनियर क्लब एफसी ओसका लागि गोलकीपरको रूपमा खेल्छन् जुन नेदरल्याण्ड्सको दोस्रो सबैभन्दा उच्च फुटबल हो।
आरएल रोनाल्ड कोम्यान, डेबी, टिम, बार्टिना र रोनाल्ड कोम्यान जूनियरबाट
रोनाल्ड कोम्यानको पारिवारिक जीवन
"टिन्टिन" उनी क्यारियर फुटबल र व्यवस्थापनमा उसको सफलताको श्रेय हो जुन परिवारबाट उसले पाएको प्रेम र समर्थनमा छ। हामी तपाइँलाई रोनाल्ड कोम्यानका आमा बुबा र भाइबहिनीको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। साथै, उनको परिवार जरा बारे तथ्यहरू यहाँ उल्लिखित हुनेछ।
रोनाल्ड कोम्यानका आमाबाबुको बारेमा:
परिवारका कुलपति मार्टिन एक फुटबलर थिए जसले स्थानीय क्लबहरूमा उनको व्यापार चलाउँथे। उनले आफ्नो बुट झुन्ड्याउनु अघि नेदरल्याण्डको राष्ट्रिय टोलीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति पनि बनाए। मार्टिन २०१ 2013 मा बित्नुभयो र - त्यो वर्ष सम्म - धेरै फुटबलमा संलग्न थिए।
ती दिनहरूमा फुटबलरको रूपमा रोनाल्ड कोम्यानको बुबाको एक दुर्लभ तस्बिर।
रोनाल्ड कोम्यानकी आमा, मारिजके लोकप्रिय नहुन सक्छन तर उनको प्रबन्धकको लालनपालनमा उनले काम गर्ने अमूल्य भूमिकाको मात्रा बोल्छिन्।
प्रबन्धकका भाई-बहिनीहरूको बारेमा:
रोनाल्ड कोम्यानका आमाबाबुबाट अगाडि बढ्दै, उनका ठूला भाइ एरविन पनि कम उल्लेखनीय फुटबल क्यारियर पछि प्रबंधकको रूपमा फुटबलमा छन्। उनी ओमान राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हुन् र उनीसँग व्यवस्थापकीय क्षमतामा वर्षौंको अनुभव छ।
प्रबन्धकको भाइ एरविनलाई भेट्नुहोस्।
रोनाल्ड कोम्यानका आफन्तहरू को हुन्?:
प्रबन्धकको परिवारको जराको बारेमा धेरै थाहा छैन। विशेष गरी जब यो उहाँका बुवा र आमाबुबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। उनका काका र बुआहरू थोरै चिनेका छन जबकि उनका भतिजा, भतिजा र भतिजोको पहिचान हुन सकेको छैन।
हुनसक्छ, तपाईंले प्रश्न सोध्नुभएको छ ... जो रोनाल्ड कोमान हो?
अब यो तपाइँको पिचबाट उसको व्यक्तित्व ल्याउने समय हो। सबैभन्दा पहिला, जीवन फुटबॉल खेल्ने र कोचिंग बाहेक अरू धेरै छ। रोनाल्ड कोम्यानलाई त्यो राम्ररी बुझ्दछ र पेशेवर बबल बाहिरका मानिसहरूसँग सम्बन्ध राख्नमा ऊ ठूलो छ।
धेरैले उनलाई एक प्रभावशाली व्यक्ति मान्दछन् जो भावनात्मक रूपमा बुद्धिमान, आशावादी, हंसमुख र आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्य खुलाउन खुला छ। उसलाई साइकल चलाउन, पढ्न, अन्य रुचिहरू र शौकहरूको बीच चलचित्रहरू हेर्न मन पर्छ।
साइकलिंग उनको शौकहरु मध्ये एक हो।
रोनाल्ड कोम्यानको जीवनशैली:
२०२० मा कोचको नेटवर्थ र पैसा कमाउन उसले के गर्छ छलफल गरौं। Koeman को कुल सम्पत्ति million 2020 लाख को अनुमान छ। फुटबल खेलाडी र ब्यवस्थापकहरु सुन्दर पैसा तिर्दछन्, एक विकास जसले किन कोच धनी छ भनेर वर्णन गर्दछ।
Koeman को तलब, मजदूरी र बोनस को एक तरफ, उनीसँग प्रायोजन र समर्थन द्वारा पनि आय ट्रिकि। छ। कोच बेंटले कारमा सवार छ र महँगो घरहरू र अपार्टमेन्टमा बस्छ जुन उसको मूल्य अभिव्यक्ति गर्दछ।
रोनाल्ड Koeman तथ्यहरु
यहाँ हामी तपाइँलाई व्यवस्थापक को एक पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न सहयोग गर्न को लागी थोरै ज्ञात वा अनउल्ड रोचक तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दछौं।
तथ्य # 1 - फुटबल स्ट्यान्ड:
प्रबन्धकको परिवारको Groningen FC मा स्ट्यान्ड छ। स्टन्ड क्लबको सफलताको लागि Koeman को योगदान को सराहना मा छ। प्रबन्धक र उसको भाइ दुवैले आफ्नो क्यारियर क्लबको साथ शुरू गरेका थिए जबकि उनीहरूका बुवाले क्लबको एकेडेमी सुधार गर्न मद्दत गरे।
तथ्य # २ - कोचिंग रेकर्ड:
कोमान र उनका भाइ पहिलो भाईबहिनी हुन् जसले एकै साथ राष्ट्रिय टोलीहरू प्रबन्ध गरेका थिए। जब “टिन्टिन” नेदरल्याण्ड्सको कोच थिए, उनका भाइ एरविन ओमानको इन्चार्ज थिए। अचम्म, के यो छैन?
तथ्य #3- प्रभावशाली डिफेन्डर:
एक खेलाडीका रूपमा, कोम्यान तीन डच स्थानीय फुटबल टीमहरूको लागि खेल्ने केहि फुटबलरहरू मध्ये एकको रूपमा रेकर्ड पुस्तकहरूमा गए। क्लबहरूले PSC, Ajax र Feyenoord समावेश गर्दछ। यसका साथै, उनका गोलहरू १ 193 of of मा in 533 खेलमा ट्यांकी थिए जुन डिफेन्डरले गरेको सबैभन्दा बढी गोलहरू मध्ये एक हो।
Koeman धर्म अझै अज्ञात छ। यद्यपि उनका बुबा र छोरीले ईसाई नामहरूबाट कटौती गरेमा उनी इसाईमत पालन गर्ने विश्वासी हुँ भन्ने सम्भावना देखिन्छ।
तथ्य # - - उहाँको उपनामको बारेमा:
कार्टुन चरित्र टिन्टिनको नक्कल गर्दै रोनाल्ड कोम्यान।
बार्सिलोनाका लागि खेल्ने क्रममा कोइम्यानलाई "टिन्टिन" उपनाम दिइयो। यो किनभने उसले कार्टन चरित्रको साथ सामञ्जस्य साझेदारी गर्दछ साथै बार्सिलोनाको चिडियाखानामा रहेको अलबिनो गोरिल्लासँग पनि।
हामीले यस रोनाल्ड कोम्यानको जीवनीलाई तल तालिकामा संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका छौं ताकि तपाईं उहाँ बारे सारांश जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
पुरा नाम रोनाल्ड कोमेन
जन्म मिति मार्च १ 21 1963 को २१ औं दिन
जन्मस्थान जापानम नेदरल्याण्डमा
आमाबाबुले मार्टिन र मारिजके
भाई बहिनीहरू Erwin
बच्चाहरु रोनाल्ड कोम्यान जून, टिम र डेबी
सोख साइक्लि,, पढ्ने र चलचित्रहरू हेर्न।
नेट मूल्य $ 8 मिलियन
रोनाल्ड कोम्यानको हाम्रो बायो पढ्नका लागि धन्यबाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईलाई विश्वास दिलाएको छ कि सफलता कुनै कार्य होइन तर बानी हो। लाइफबगरमा हामी तपाईंको मनपर्ने फुटबल प्रबन्धकहरूको बारेमा संस्मरणहरू पठाउनेमा सत्यता र निष्पक्षता हेर्छौं। कोमानको बायोग मा सही जस्तो देखिदैन कि केहि हेर्नुहोस्? हामीलाई सम्पर्क गर्न वा तल टिप्पणी दिनुहोस् राम्रो गर्नुहोस्।